साउदीको सबालमा श्रममैत्री वातावरण स्थापना गर्नु नै हाम्रो कर्तब्य हो:क्षेत्री ,उपाध्यक्ष, एनआरएन साउदी - पिटि अनलाईन न्यूज
साउदीको सबालमा श्रममैत्री वातावरण स्थापना गर्नु नै हाम्रो कर्तब्य हो:क्षेत्री ,उपाध्यक्ष, एनआरएन साउदी
२० श्रावण, २०७८ ०१:१८
साउदी ।पिटि अनलाईन न्युजका संवाददाता सुबिन राज सेर्पालीले गैर आवासीय नेपालि संघ राष्ट्रिय परिषद साउदीका निर्वाचित उपाध्यक्ष राम बहादुर क्षेत्री संग गरिएको समसामयिक NRNAको भावि योजना ,निर्वाचन र नयाँ नेतृत्व विषयक कार्यक्रम संवन्धी अन्तरबार्ता :
सुबिन राज सेर्पाली: पिटि अनलाईन न्युजमा यहाँ लाई हार्दिक स्वागत छ।
राम बहादुर क्षेत्री:धन्यबाद व्यक्त्त गर्दछु, विचार सम्प्रेषण गर्ने मौका प्रदान गर्नुभएकोमा !
सेर्पाली:सर्बप्रथम यहाको आफ्नै शब्दमा परिचय दिनुहोस् न?
क्षेत्री:मेरो स्थाई बसोबास अर्घाखांची जिल्लाको सन्धिखर्क न.पा. ३ मा हो ।विगत ७ वर्षदेखि साउदीअरब लाई कर्मथलो बनाएको छु । पेशाले ग्लोबल आईएमई बैकको गल्फ प्रमुखका रूपमा कार्यरत छु !
सेर्पाली:भर्खरै मात्र गैर आवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय परिषद साउदीको महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ यसलाई तपाइँ कसरी हेर्नुभएको छ?
क्षेत्री:यो एउटा नियमित र संस्थाको विधान बमोजिमको कृयाकलाप हो । हरेक २ वर्षमा अधिवेशन गरेर नयाँ कार्यसमिति बनाउने वैधानिक व्यवस्था छ । यसलाई मैले सामान्य र नियमित प्रकृयाको रूपमै लिएको छु ।
सेर्पाली:NRN साउदीले अब यहाँका श्रमिकहरुको हितमा ,सामाजिक संस्थाको माध्यमबाट केके काम गर्न जरुरी छ?
क्षेत्री:सामान्यतय: साउदीअरब मा रहेका नेपालीहरूले भोग्दै आएका समस्याहरूका विषयमा एनआरएन जानकार छ । पछिल्लो समयमा कोभिडको कारणले परिस्थितिलाई अझ प्रतिकुल बनाएको छ। अरू धेरै चुनौतिहरू हामीसामु खडा भएका छन् ।अब एनआरएन को नंया टीम कोभिडबाट सिर्जित तमाम समस्याहरूको कारणबाट नेपाली दाजुभाई दिदी बहिनि हरूले भोग्नुपरेका समस्याको समधानमा केन्दित हुनेछ ।
निवर्तमान कार्यसमितिले नमुना योग्य माहामारीमा अक्सिजन सिलिन्डर अभियान संचालन गरि छुट्टै आदर्श बनायो। यसमा कसलाई धन्यवाद दिनुहुन्छ ?
यो अभियानमा तन, मन र धनको सहयोग गरेर जोडिनु भएका सबै साउदीअरबमा कर्मथलो बनाउनु भएका दाजुभाई दिदी बहिनि हरू धन्यबादका खास पात्र हुनुहुन्छ ।
सेर्पाली:निर्वाचन भइ नया नेतृत्व कार्यसमिति चयन भैसकेको छ ।जसमा तपाईं उपाध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदमा निर्वाचित हुनुभएको छ के छ तपाईको भावी कार्ययोजना ?
क्षेत्री:खासमा ब्यक्त्ति एकजनाले के गर्ने नगर्ने भन्दा पनि टीमवर्क ठूलो कुरा हो । भरखर मात्र हाम्रो नयाँ कार्यसमिति निर्बाचित भएर आएको छ, अब हामी छिट्टै नै बैठक बसेर २ वर्षको कार्ययोजना बनाएर अगाडी बढ्नेछौ ! अग्रजका सल्लाह, सुझावलाई पनि समेटेर हाम्रो टीमले हरेक नेपाली मन सम्म पुग्ने कोशिष गर्नेछ । दुखमा परेका नेपालीलाई राहात, उद्दारमा केन्द्रित हुनेछ ।
सेर्पाली:गैर आवासीय नेपाली संघ साउदीको उपाध्यक्ष पदमा रहेर NRN को भुमिका श्रमिक संग कसरी बाढ्नु हुनेछ?
क्षेत्री:एनआरएन को मुख्य उद्देश्य नै देश बाहिर रहेका नेपालीहरूको सेबामा केन्द्रित भएर मातृभुमिको विकाशमा टेवा पुर्याउनु हो । साउदीअरबको सबालमा श्रममैत्री वातावरण स्थापना गर्नु नै हाम्रो कर्तब्य हो । रोजगारीमा आएका नेपाली दाजुभाई दिदी बहिनिहरू ले करारमा उल्लेख भएको बेतन को सुनिश्चितता, स्वास्थ्य, सुरक्षाको प्रत्याभुती नै हाम्रो सरोकारका विषयवस्तु हुन् ! यि र यस्तै सेरोफेरोमा रहेर हामी हाम्रो टीमको कार्ययोजना तयार गर्छौ ।
सेर्पाली: NRN साउदीले श्रमिक र यहाँका संघ संस्था संग कसरी प्रत्यक्ष जोडिएर काम गर्छ श्रमिकहरुको हितमा?
क्षेत्री:अहिले पनि एनआरएनले यहा दुखमा परेका नेपाली दाजुभाई दिदी बहिनि हरूलाई सहयोग गरिनै रहेको छ ! दमाम, जेद्दा र रियादमा सेल्टर स्थापना गरेर रोजगारी गुमाएका, चरम आर्थिक समस्यामा परेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फिर्तीको वातावरण नबन्दा सम्मलाई बस्ने, खानेको व्यवस्था गरिएको छ ! त्यस्ता नेपाली हरूलाई नेपाली नियोगको सिफारिसमा हवाई टीकटको पनि व्यवस्था गरिएको छ !
सेर्पाली:अन्त्यमा के भन्न चाहानुहुन्छ मनमा लागेका कुराहरु ?
क्षेत्री:अन्त्यमा जो कोही पनि संस्था लाई अगाडी बढाउदै गर्दा समाजमा रहेका अन्य संघ/संस्था, सरकारी निकाय तथा व्याक्त्तीहरूसंगको सहकार्य को जरूरी हुन्छ ! सबै संघ संस्था हरू संग सहकार्य गर्न एनआरएन सदैब तत्पर छ ! हामी सबै मिलेर साउदीअरबमा रहेका नेपालीहरूको हितमा केन्द्रित हुनुपर्छ । धन्यवाद !
बङ्गलाचुली गाउँपालिकामा दलितहरुको मुद्दामा माओवादी अगाडि : सुशील परियार ,अध्यक्ष...
साउदीको सबालमा श्रममैत्री वातावरण स्थापना गर्नु नै हाम्रो कर्तब्य हो:क्षेत्री...
MCC पास गरे सांसद तथा नेतालाई गाउँ नफर्कन प्रवासी युवाको...